ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအွန်လိုင်းဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မည် - အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအွန်လိုင်းဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မည် - အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 21 2021 |5မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်မအိမ်ထောင်ပြုမဖြစ်မှီငါသည်အအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ငါ့တရားမျှတတဲ့ရှယ်ယာနဲ့ကြုံတွေ့, အွန်လိုင်းအလားအလာ suitors ထံမှအများအပြားက e-mail အပါအဝင်. ငါတကယ်ကောင်းကိုတွေ့မြင်ရခဲ့, မကောင်းတဲ့နဲ့အရုပ်ဆိုး. ထိုအခါငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းငါ့ရည်းစားအများအပြားနှင့်အတူ chatted ပါပြီ. ဤဆောင်းပါးသည်အဘယ်သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးပထမဦးဆုံး e-mail များအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့အသွေးကို run ကိုအအေးကိုအကျဉ်းချုပ်နှင့်ငါတို့လက်အပိုဒ်၏အဆုံးမီ DELETE hit!
ဖော်ရွေမှုဖြစ် Do - ကသိသာအသံနှင့်သင်သူတို့သည်မိမိတို့အဖွင့် e-mail ပို့သည့်အခါတို့သည်ဤမေ့လျော့မည်မျှအံ့သြသွားလိမ့်မယ်. ဦးနှောက်ရဲ့ယုတ္တိပုလ္အစိတ်အပိုင်းကျော်ကြာမြင့်သော်လည်းကြောင့်ယ်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရချင်တယ် (ဖုန်းကို / ချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ပင်လိင်အပေါ်ပြောနေတာ). ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေထိုလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး. ကျနော်တို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ခြေချောင်းနှစ်လိုနှင့်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသင်နှင့်အတူမည်သို့ခံစားရကြည့်ပါ. ကျနော်တို့ romanced စေလိုသင်မှဖော်ရွေစကားပြောဆိုမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစား. သင်ကြိုက်လျှင် '' ကျွန်တော်တို့ကိုတက်နွေး '' အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ. ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အတူအစဉ်ပွင့်လင်း, e-mail, စကားပြောဆိုမှု (ရှည်လွန်းမ) နှင့်သင်သည်များစွာသောပိုတုံ့ပြန်မှုများကိုရလိ​​မ့်မယ်.
ဒါကြောင့်အလင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကိုစောင့်ရှောက်ပါနဲ့ - စိတ်ဝင်စားဖို့ / အာရုံစိုက်မှုကိုသိမ်းပိုက်မှုများနှင့်အုတ်ရိုးကိုပယ် / off-ချပြီးအကြားချိန်ခွင်ရှိပါတယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုကောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်သော e-mail ရေးဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါကဖိအားများနှင့်တူသည်ဟုခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာသိ. ငါပေးနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်. သင်စိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်သကိုကူညီနှင့်သူမ၏သင်တို့ဆီသို့မနျးွခငျးတန်ဖိုးရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေဘို့အကြံပေးချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲပျင်းစရာဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မည်ကဲ့သို့အပေါ်အောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းကိုဖတ်ပါဒီမှာရှိတယ်. သူမ၏ profile ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့်သင်အဲဒီမှာရှာတွေ့တစ်ခုခုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်. ဖြစ်နိုင်လျှင်သင် connection တစ်ခုဖန်တီးရန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီအရာတစ်ခုခုကြောင့်နောက်ကျောတစ်ခုကိုပြောပြပါ. ချီးမွမ်းကောင်းစွာသူတို့ overdone မဟုတ်နှင့်စစ်မှန်သောဖြစ်ကြောင်းပေးအပ်အလုပ်လုပ်. တစ်ဦးကအသေးချီးမွမ်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံး e-mail များအတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်. သင်သင့်သောနေ့ရက်ကာလ၌သင့်အားဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်, သင်မည်သူတစ်ဦး bit နဲ့ပြသကြောင်းအရာတစ်ခုခု. သင်ကဟာသကောင်လေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ဟာသသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ, ကိုယ့်ကြောင့်မင်းမပါဘူး. ခြောက်သွေ့သောဟာသကိုအလွယ်တကူ e-mail, ကနေတဆင့်ချက်များကိုတလွဲရနိုင်. အမျိုးသမီးများစိတ်ခံစားမှုနဲ့လူတိုင်းအတွက်အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ချိတ်ဆက်, နှင့်သင်သူနှင့်အတူ connection တစ်ခုဖန်တီးနိုင်လျှင်သင်သည်ထိုတစ်ဝက်နည်းလမ်း.
ဒါကြောင့်အတိုချုပ်စ​​ောင့်ရှောက်ပါနဲ့ - ငါတို့သည်သင်တို့ဖော်ရွေပြီးကျွန်တော်တစ်ခုအက်ဆေးချင်ကြပါဘူးပျော်စရာဖြစ်လိုပေမယ့်. ကျနော်တို့မှာရှိသမျှဖတ်လျှင်စာအရေးအသား၏အဖြေတစ်ခုလုံးစာမျက်နှာဖွယ်ရှိအိပ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုစေလွှတ်တော်မူမည်, သို့သော် riveting ကြောင့်ဖြစ်ရစေခြင်းငှါ,. မှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဖတ်နှင့်ကျွန်တော်စာအရေးအသား၏တစ်ခုလုံးစာမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့ e-mail ကိုဖွင့်တဲ့အခါသင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စွဲလမ်းနေလျှင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုဖြစ်လိမ့်မည်အမြန်နိုင်ပါသည်! ကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ရှုဖို့အဘို့သင့်ကို e-mail ကိုလက်လှမ်းမီပြီးအလွယ်တကူဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်, သောရေတိုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆုပ်ကိုဆိုလိုသည်. အရေအတွက်ကျော်အရည်အသွေးအတွက် Go. တိုတိုနှင့်ထိခိုက်မှုအပိုဒ်တစ်ဦးအနေနဲ့ချီးမွမ်းအနည်းငယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးစာရွက်ဖြစ်ပါသည်.
ငြီးငွေ့စရာမဖြစ်ပါနဲ့ - OK ကိုငါဘာပြောရသိရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုမြန်ဆန်စွာအရိပ်အမြွက်၏စုံတွဲတစ်တွဲပေးစေခြင်းငှါငါသွားရ၏. ငြီးငွေ့စရာထိုကဲ့သို့သောသင့်စရိုက်များအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခန့်အချက်တွေစာရင်းတစ်ခုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပဲသူတယောက်မျှမရှိအခြားအချက်အလက်တွေနှင့်အတူစကားပြောလျက်တက်သည်ရှိမရှိသူမ၏မေးသောမက်ဆေ့ခ်ျ. သူသည်သင်၏ e-mail, ကနေသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ခံစားရပါဘူးဆိုရင်သူမကသူကိုသင်တို့အားစကားပြောစေချင်တယ်ရှိမရှိသိမည်မဟုတ်. ဒါကြောင့်သူမပဲ reply ဖို့အလုပ်ရှုပ်ခံနေရမည်မဟုတ်. သင်တို့သည်လည်းပြန်ရေးဖို့သူမ၏မဖြစ်မနေခံစားချင်တယ်. ကိုယ့် profile ကိုပြန်ရေးရန်မထားပါနဲ့, သူမကသူစိတ်ဝင်စားလျှင်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်.
cheesy မရှိကြ - လူအတော်များများမှာခက်ခဲလွန်း overcompensate နှင့်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်. ဒီ Over-အသုံးပြုမှုချီးမွမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဟာသတူကြည့်နိုင်, အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး cheesy အဖြစ်ပယ်လာ, မှာအဆိုးဆုံးအပူတပြင်းအဖြစ်. သင်ကအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေစကားပြောလျက်ရှိ၏သကဲ့သို့သူ့အားရေးပါ, လည်းတရားဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူမ၏အထင်ကြီးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်၏စိတ်ကိုထားသို့ကျရောက်ခြင်းအမှုသည်ထံမှသင်တို့ကိုကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဟာသနှင့်ချီးမွမ်းအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း စပါးအနည်းငယ်သာ. ဆားပိုကောင်းအစားအစာကိုပဲတူအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောအခါကသာသည်ကောင်း၏, တူညီတဲ့နိယာမကိုဒီမှာသက်ဆိုင်.
အားလုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖော်ပြမထားပါနဲ့ - တခါတရံသူတို့ကပထမဦးဆုံးသော e-mail အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မယ်. တစ်ခါတစ်ရံအထိုသူတို့သည်မိမိတို့မလိုချင်ကြဘူးသမျှသောစရိုက်များကိုစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ် (ပင်ပိုမိုဆိုးရွား - cringe!) ဒီအဖြစ်တင်းကျပ်ပယ်လာအအေးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်ဤသို့ပြုလျှင်သူမ reply နိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း.
သင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံကြအခြားအမျိုးသမီးများပယ် slag မထားပါနဲ့ - ဝမ်းနည်းစရာဒီလွန်းငါ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေ့ရက်ကာလ၌သာမန်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲအအေးငါ့ကိုအလှည့်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူရက်စွဲပါဖြစ်ပါတယ်အခြားသောမိန်းမပယ် slagging တစ်ဦးသည်လူကိုနားထောင်ဖို့အလွန်မသက်မသာဖြစ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို၏နောက်ကျောမှာကျနော်တို့သူမ၏ကဲ့သို့တူညီသောကံကြမ္မာကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ် အကယ်. ကျွန်တော်တို့အံ့သြကြပြီးကျွန်တော်တို့သင်သည်ဤအရပ်၌ရှိမျှတို့သည်သင့်ကိုငါတို့ကဲ့သို့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံရပါက tenderhooks အံ့သြအပေါ်ခံစားစေတယ်. ဘေးဥပဒ်နှင့်တူဒီရှောင်ကြဉ်ပါ.
ပထမဦးဆုံး e-mail, လိင်မပြောပါနဲ့! - ငါသည်သင်တို့ကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ဆွဲဆောင်မှုကိုတွေ့သောအခါသင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ကြောင်းနာ​​းလည်, ဤအတူမှားတစုံတခုမျှမရှိ. သို့သော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများလိင်များအတွက်သက်သက်ကိုချဉ်းကပ်ခံရ ပတ်သက်. အလွန်အထိခိုက်မခံများမှာ. အွန်လိုင်းမှချိန်းတွေ့ site ကိုအသုံးပြုသူအများစုကအမျိုးသမီးတွေအတွက်, ဤရှိပါတယ်တဲ့မူလတန်းကျောင်းအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ချိန်းတွေ့နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနေပါသည်. ငါတူလွန်းချိန်းတွေ့ site ပေါ်တွင်နေသောလူများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်မှန်သည်ကိုသိ, နှင့်ကံမကောင်းသူတို့ချထားရလိုသောကြောင့်ပဲရှိပါတယ်သောသူအများတို့သည်လည်းရှိပါတယ်. နှင့်ငါတို့ရေဒါ Sensitive ထိုလူတို့ကို detect လုပ်ဖို့ညှိနေကြတယ်. ကျနော်တို့အလွန်လျှင်မြန်စွာထိုသူတို့ကိုနှုတ်ပြပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့် '' ထိုလူတို့ကို '' တစ်ဦးအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခံရရှောငျရှား. သင့်ရဲ့ပထမဆုံး e-mail အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှ ဖော်ပြ. ရှောင်ကြဉ်ပါ. ကျွန်မအကြံဉာဏ်တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောသွားသောအထီး '' ကောက်အနုပညာရှင်များ၏ထံမှထွက်အရပ်၌ဖြစ်သည်ကိုသိကြပါ, နှင့်ဤရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျနော့်အမြင်ထဲမှာအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. လူတယောက်လမ်းပြုသည့်အခါအနည်းဆုံးကိုသာအလုပ်လုပ်ပါတယ်. ပျော်စရာပရောပရည်လုပ်ခြင်းထူးဆန်း, သင်ပထမဆုံးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအတွက်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြတ်ပြီးလာကြပြီဆိုရင်သင်မူကား, လွန်းတယ်လို့ဇာတ်စင်စေမည်မဟုတ်. ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးသမီးများက crass ဖြစ်ပါသည်. Shortcut တစ်ခုတူခံစားရကျနော်တို့သင်သည်ဤချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ကြိုးစားနေကြပါတယ်လူထုများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏ယုံကြည်. သတိရ, သူမကိုအထူးခံစားရစေလိုသည်. ပထမဦးဆုံး connection တစ်ခုပေါ်မှာအလုပ်လုပ်, ထို့နောက်အချို့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပရောပရည်လုပ်ခြင်း.
ရှိသမျှတို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုညာထားရ - သူမသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူစေခြင်းငှါ, သူသည်လူများမှထွက်သွားရုံမျှအမျိုးသမီးဖြစ်သည်ကိုသတိရ. သင်အွန်လိုင်းအမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောပြဿနာများရှိခြင်းနှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျပြန်ကြားချက်နေကြပါတယ်မယ်ဆိုရင်, ပထမဦးဆုံးထားသင့်စိတ်ကိုကြည့်ရှု. သင်မဆင်မခြင်ခံစားနေကြ? သင်မပေးလိုက်တဲ့အခါသင်တဦးတည်းသော e-mail သို့အားလုံးသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုတင်ပါနဲ့? ဒါကြောင့် အကယ်. ဤ e-mail, အတွက်ကိုဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်နှင့်အမျိုးသမီးကိုချွတ်ပယ်လိမ့်မည်ဟု. သင်သည်များစွာသောရွေးချယ်မှုများရှိပါသည်သိနိုင်အောင်သတ်မှတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်ပေါ်တွင်အလုပ်. သင့်ရဲ့ရက်စွဲများလာနှင့်မဆို၏ရလဒ်ကိုမူမည် 1 e-mail, အရေးမပါ. ဒီပျော်စရာပေးပို့ဖို့သင်သည်တတ်နိုင်လိမ့်မည်, ကောင်းတစ်ဦးတုန့်ပြန်ရလိမ့်မည်ဟုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်နှလုံးအလင်းမက်ဆေ့ခ်ျများ.
ပြည့်စုံဆက်ဆံရေး Keep လုပ်နည်း
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အဘယ်သူဆပ်ပေးသငျ့သ – အမျိုးသားများအဘို့အကြံဉာဏ်
5 Tech မှချို့တဲ့ခြင်းကိုမပြုနည်းလမ်းများ